Nofaranan'ny Danemark ny fameperana COVID-19 rehetra taorian'ny fikatonana 548 andro
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Danemaka » Nofaranan'ny Danemark ny fameperana COVID-19 rehetra taorian'ny fikatonana 548 andro
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Kolontsaina • Vaovao Mafana Danemaka • fanabeazana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • fiantsenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Manomboka amin'ny sasakalin'ny 10 septambra, ny virus COVID-19 dia tsy sokajiana ho "aretina krizy ara-tsosialy" avy amin'ny governemanta Danemarka.
Nanambara ny manampahefana Danoa fa voafehy ny valan'aretina.
Tsy misy fepetra manokana hapetraka any Danemarka hiatrehana ny COVID-19 manomboka ny 10 septambra.
Notehirizin'ny manampahefana danoà ny zon'izy ireo hanamafisana ireo fepetra manokana “raha toa ka mandrahona andraikitra lehibe eo amin'ny fiarahamonina indray ity areti-mandringana ity”.
Nanambara ny tompon'andraikitra ao amin'ny governemanta Danemarka fa manomboka amin'ny 12 ora maraina amin'ny 00 septambra, ny virus COVID-10 dia tsy sokajiana ho "aretina krizy ara-tsosialy" ao amin'ny firenena, ary tsy misy fepetra manokana horaisina hiadiana amin'ny coronavirus ao anatin'ny sisintanin'i Danemark.
Ny lalàna sisa rehetra manohitra ny COVID-19 dia nofoanana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny firenena hatramin'ny androany, ary nanao izany Danemark ny fanjakana voalohany ao amin'ny Vondrona Eropeana (UE) niverina tanteraka tamin'ny fahazarana isan'andro mialoha ny areti-mando.
Ny fameperana rehetra napetraky ny manampahefana Danoa teo aloha, anisan'izany ny fepetra takian'ny COVID hiditra amin'ny klioba alina sy toerana hafa, fandrarana ny fivorian'ny besinimaro sy ny fanaovana maska ​​tsy maintsy atao, dia nesorina, 548 andro taorian'ny nanambaran'ny praiminisitra Danemark Mette Frederiksen, voalohany fa hidina ao aminy izy. firenena.
Tamin'ny martsa 2020, Denmark dia iray amin'ireo firenena voalohany nampihatra fepetra henjana hiadiana amin'ny COVID-19.
Tamin'ny nanambarany voalohany ny fanapahan-kevitra handao ny fototra ara-dalàna amin'ny fameperana tamin'ny volana lasa, nilaza ny manampahefana Danoa fa "voafehy ny valanaretina." Notehirizin'izy ireo ny zon'izy ireo hanamafisana ireo fepetra manokana “raha toa ka mandrahona andraikitra lehibe hafa eo amin'ny fiaraha-monina ny areti-mandringana.”
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana any Danemarka, ny tahan'ny vaksiny avo indrindra dia nanampy ny firenena hametraka modely ao amin'ny Vondrona Eropeana ary hiverina amin'ny fiainana ary tsy misy fameperana mifandraika amin'ny COVID. Teratany Danoa telo amin'ny efatra no mihevitra fa vaksinim-pirenena ny fanaovana vaksinina hiadiana amin'ny viriosy, hoy ny fanadihadiana nataon'ny Eurobarometer natao tamin'ny volana lasa tamin'ny anaran'ny Parlemanta eropeana.
Amin'ny Danes voafantina voafantina 1,000, 43% no nanaiky tanteraka ny fanambarana fa tokony hatao vaksiny ny tsirairay, raha 31% kosa nilaza fa mirona hanaiky. Ho an'ny EU iray manontolo, ny isan-jaton'ny olona manaiky tanteraka izany na tsia dia miisa 66.
Tamin'ny volana septambra, maherin'ny 73% ny mponina 5.8 tapitrisa ao Danemark no vita vaksiny feno, ary mihoatra ny 8.6 tapitrisa ny doka fanoherana ny COVID notanterahina tamin'ny fitambarany. Nandritra ny areti-mandringana, Denmark dia nanoratra tranga maherin'ny 352,000 tamin'ny virus.
November 10, 2021 amin'ny 07: 47
Hey, lahatsoratra mahafinaritra, ireo fitaovana maimaim-poana rehetra ireo dia safidy tsara mety hanampy ny orinasa madinika fa ny fitarihana manam-pahaizana dia tsy maintsy ilaina amin'ny orinasa fanombohana mba hahafahanao mifandray aminay. Raha ny marina, ny The dia natokana hanamafy ny fepetra manokana "raha manohintohina ny asa lehibe eo amin'ny fiaraha-monina ny areti-mifindra.